विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गुमाएका प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन लेखे यस्तो मार्मिक स्टाटस ! – Khabarhouse
विहेको केहि दिन अघि प्रेमीका गुमाएका प्रकाशले भ्यालेनटाईन डे को दिन लेखे यस्तो मार्मिक स्टाटस !
Khabar house | २ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार १५:११ | Comments
काठमाडौं : माघ १० गते दु’र्घटनामा परेर नि’धन भएकी रमिलाकाे श्रीमान प्रकाश यति बेला वियाेगमा छन् । आफ्नो बिहेको निम्तो बाँड्न हिडेकी उनलाई टिप्परले ठ’क्कर दिँदा रमिलाकाे घ’टना स्थलमा नै मृ’त्यु भयो। आज अन्य जाेडी ले प्रेम दिवस मनाईरहदा उनले आफ्नाे जाेडी नबने पनि अरु जाेडीलाई शुभकामना दिएका छन्। उनले मार्मिक स्टाटस लेखेका छन् ।
उनी लेख्छन, “मान्छे जस्तोसुकै किन नहोस् । मन लाई माया गर्ने मायाको कदर गर्ने एक राम्रो जोडी बनेर लाइभ सँगै बिताउन हिम्मत राख्ने हरेक प्रेमी जोडीहरु लाई प्रेम दिवसको शुभकामना।” सात जनमको माया तिमीलाई बुढी सायद तेरो खुशी यो पापी दुनि याँले हेर्न सकेन है । तर यो जुनिमा मात्रै होइन फुच्ची सातै जनमसम्म तिमीलाई माया गरिरहन्छु यो मुटुमा त मात्र छस् । तेरो ठाउँ कसैले पाउने छैन बुढी । छाडेर गइस है ।
धेरै दिन भयो वेवी तिम्रो फोन र एसएमएस आएको छैन कसैको कल वा एसएमएस आएपनि आत्तिएर झट्ट हेर्छु कि तिमीले एसएम एस गरेउ कि भने । मेरो आँखामा मेरो आत्मामा बसेको छउ तिम्रो मायाको कदर गर्ने छुँ । सँधै बुढी दुनियाको सबै प्रेमी हरुलाई तिम्रो जस्तै माया गरुन यो मायाको अस्तित्व राखुन् । आइ लभ यू फरइभर मेरो मुटु मिस ग ब्याड्ली । ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मेरो फूच्ची ।